UMalema ukhuluma iqiniso okumele laziwe ngabantu - Ilanga News
Home Izindaba UMalema ukhuluma iqiniso okumele laziwe ngabantu
UMalema ukhuluma iqiniso okumele laziwe ngabantu
Okuningi akukhulumayo kujulile futhi kuliqiniso kodwa kuyanyathelwa
UMNU Julius Malema, ongumholi we-Economic Freedom Fighters, okuthiwa ukhombisa ubudoda ngokulimela iqiniso nokuma entweni akholelwa kuyona.
NOMA ngabe kawumthandi uMnu Julius Malema, kodwa kufanele ulimele iqiniso lesibindi nobudoda bokumela into okuyiyona abaningi kwezepolitiki nasempilweni, abesabayo ukuyenza. Baningi abasezikhundleni kwezobuholi, abanye bangabanumzane emizini yabo, abanye kwezepolitiki abehlulekayo ekugcineni ukumela into okuyiyona neyokwelapha isizwe nemindeni; ngenxa yokwesaba nokufuna ukuhlale bebahle. Lihle iqiniso, okwenziwa nguMnu Malema ongumholi we-Economic Freedom Fighters (EFF), ngikubona kuzofundisa abaningi bethu ukumela iqiniso kuze kuyoba sekugcineni.
Ecaleni phakathi kwe-EFF ne-Afriforum, elimayelana nokuthi uMnu Malema wacula iculo lomzabalazo elithi, “Kill the Boer” (Bulala Amabhunu), ubufakazi bungekho, utshele abamhlophe amaqiniso ukuthi bangobani kuleli zwe lase-Afrika, okuyinto amaqembu ezepolitiki asabayo ukuyikhuluma. Ukutshelwa ukuthi oyisemkhulu bafika kanjani kuleli, babedlula befana nezivakashi, yiqiniso elingephikwe. Ukuma enkulumweni yokuthi siqhamukaphi namahubo angamaculo omzabalazo, kwenza abamhlophe bangakhohliseki. Kasesabi ngalezi zinto ngoba ziyingxenye yobuthina yesintu namasiko emvelaphi.
Ukuvela kwengcindezelo yikhona okwenza sibuyele kwesafundiswa sikhuliswa ezintabeni ezahlukene, siqhathwa, la mahubo eculwa, kwanqotshwa ngawo ezimpini amaBhunu ezosiphuca izwe. Amahubo afana nelikaMnu Jacob Zuma elithi “Leth’ umshini wami”, kalehlukile nokuthi “Letha izinduku zami ngihlabe, ngigadle, ngidlule kule nsizwa ephambi kwami”, kodwa ngoba iningi lethu selaba yizifundiswa, lanceliswa imali ukuba lingazazi ukuthi limiphi, yingakho namhlanje umfo kaMalema esezithola ezihlalweni zezinkantolo ngento eliqiniso. Kuningi uMalema akushoyo kwezepolitiki, ngenxa yepolitiki siyaye sithathe ngokuthi akakhulisekanga kahle, kokunye ufana nengane eyihlongandlebe.
Singakusho lokhu ngokucabanga nokwahlulela kwethu – ngezizathu ezehlukene kodwa okusasihlula wukubheka into ngeso eli ngachemile. Sonke siyazi namhlanje ukuthi sekunzima kakhulu ukulandela izinto ezishiwo ngabantu ngoba uzothi uyayilandela, uthole ukuthi kukhona laba abamsebenzisayo. Siyesaba namhlanje ukukhuluma iqiniso, silimele ngoba ucabangela impilo yakho nomndeni wakho. Kwavalwa iRobben Island, okwakuthuthelwa kuyona abakhuluma iqiniso, kwavulwa ijele la-ngunaphakade, ‘lenhlamvu yesi bhamu’ kwabakhuluma iqiniso.
Sekulula ukuthi uma uke wathi ukhuluma iqiniso, wethenjiswe isibhamu. UMalema uyayazi into ayingenela kwipolitiki. Okuningi usekukhulumile kwenzeka, okunye wakwenza kwenzeka. Zolo lokhu ungenelele izindawo zokudlela eziqashe abantu bokufika abaningi kunabokuzalwa kuleli, izikhulu ezithi ziphethe ziwuhlabe inhlali ngalokhu, kodwa isenzo sakhe sivezwe njengento embi, wezwa kukhulunywa ngapha nangapha, kodwa kube kuliqiniso akwenzile. Sengike ngamuzwa omunye owayesesikhundleni esiphezulu sobungqongqoshe, ethi leli zwe lidinga umuntu onjengoMalema ukuba ngumengameli, kuphela wukuthi kufanele afundiswe indlela yokukhuluma.
Uma ngiveza ukuthi mhlawumbe naye indlela yakhe namakhehla akubo, akuyona yokukhuluma kumbe abakhuluma ngayo, akufanele agxekwe ngalokho, ebe ekhuluma iqiniso eligcwele. Okuningi akukhulumayo uMalema kujulile kuneqiniso, kodwa kuyanyathelwa ngoba kuthiwa kulwelwa umhlaba, kanti kukhona asebethengekile, ‘abadla’ silele ebusuku. Iqiniso wukuthi abamhlophe basiphethe futhi siyabesaba ukubatshela amaqiniso. UMalema ngimthatha njengekusasa leqiniso, ngelinye ilanga eliyobonwa ngabambalwa, abayokube besuthi bengancenge sandla esizokubaphakela nokuncetheza.
Sesifikile isikhathi sokuba kube khona abazomela iqiniso, bakhohlwe yizikhundla ezizokubalahlekela, nokwesaba ijele lenhlamvu yesibhamu. Masibonge ubufakazi bukaSolwazi Elizaberth Garner, ongumbhali wezincwadi omnkantshubovu ekufakazeni kwakhe, ukuthi la maculo afana naleli (okumangalelwe kulo uMnu Malema) kwakungowomzabalazo.
Bhedlindaba “Ka Lu Phuzi Mkhize (PhD). UMengameli/Umsunguli: we-Umsamo Institute
Isigodlo SaseMlambomunye: School of African Indigenous Science.
Previous articleZibaliwe izinsuku zesitobha sePirates
Next articleBafisa ukuthola ilayisense yokuzidonsela amanzi